Inona no atao hoe polypeptide? - BALLYA
Posted on Janoary 27, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Bacitracin sy Gramicidin
Tombony azo amin'ny peptides
Prospect ho an'ny peptides
Ny pepides dia fitambarana namboarina tamin'ny fampifandraisana ny asidra α-amino miaraka amin'ny fatorana peptide, ary vokatra manelanelana amin'ny hydrolysis proteinina. Ny fitambaran'ny fatran'ny tsy fahampian-drano sy ny fatran'ny molekiola asidra amino roa dia antsoina hoe dipeptides, ary mitovy amin'izany, misy tripeptide, tetrapeptides, pentapeptides, sns. polypeptides.
polypeptides ny antibiotika dia alaina avy amin'ny volo-kolontsain'ny bakteria Polymyxa na bakteria Aerospore. Miaraka amin'ny fivoaran'ny biotechnology, ny fampiharana klinika ny peptides ho toy ny zava-mahadomelina dia nanjary be dia be kokoa, ary ny fikarohana fanafody dia mifanaraka ihany koa. Raha ampitahaina amin'ny fanafody voajanahary molekiola bitika nentim-paharazana, ny peptides dia tsy milamina tsara. Ny antibiotika polypeptide dia manana ny mampiavaka ny firafitry ny polypeptide, ao anatin'izany ny polymyxins (polymyxine B, polymyxin E), bacitracins (bacitracin, gramicidin) ary vancomycin.
Anisan'ireo antibiotika peptide, ny antibiotika isan-karazany dia misy vokarin'ny bakteria samihafa. Izy ireo dia afaka miady amin'ny otrikaretina bakteria Gram-positive, bakteria Gram-negatif, Pseudomonas aeruginosa, holatra, virus, spirochetes, ary protozoa. Izy io dia misy fiatraikany tsara ara-pahasalamana amin'ny tsimokaretina urinary, mastitis bovine sy aretina hafa. Izy io dia misy fiantraikany amin'ny bakteria amin'ny doka kely, fanamorana ny fatrany.
3. Fomba fiasa
Ny antibiotika toy izany dia misy fiantraikany voalohany amin'ny membrane ivelany misy bakteria mora tohina. Ny vondrona amino ny ampahany amin'ny polypeptide siklikika amin'ny zava-mahadomelina dia mifamatotra amin'ny teboka mifamatotra amin'ny haben'ny lipopolysaccharide membrane ivelany, izay manimba ny fahamendrehan'ny lamosina ivelany, ary ny ampahany amin'ny asidra matavy ao amin'ny zava-mahadomelina dia afaka miditra ao amin'ny fonosana ivelany, ka mihamitombo ny fahazoana mitrandraka ny membrane cytoplasmic, mitarika amin'ny fandosiran'ny molekiola kely toy ny asidra phosorika sy ny nucleosides ao amin'ny cytoplasm, ka miteraka tsy fetezan'ny sela ary hatramin'ny fahafatesana aza. Koa satria ny bakteria Gram-positive dia misy rindrin'ny sela matevina eo ivelany izay manakana ny fidiran'ny zava-mahadomelina amin'ny bakteria, dia tsy misy fiantraikany amin'izy ireo ny antibiotika toy izany.
Ny fomba fiasan'ny antibiotika peptide dia hafa ihany koa. Ny polymyxins dia afaka manova ny asan'ny membrane cytoplasmic bakteria, raha ny bacitracin kosa dia miasa eo amin'ny rindrin'ny sela sy cytoplasm. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny antibiotika peptide dia ny bakteria tsy mora mamorona fanoherana ny zava-mahadomelina, fa ny maharatsy azy dia ny poizina kokoa. Ankoatry ny fanimbana ny fonon'ny sela bakteria dia mihetsika amin'ny ravin'ny sela biby koa izy ireo. Izy ireo dia manapoizina indrindra amin'ny voa sy ny rafi-pitatitra.
Miaraka amin'ny fampiroboroboana ny bioteknolojia, ny fampiharana klinika polypeptides ho zava-mahadomelina dia nanjary be dia be kokoa, ary ny fikarohana ara-panafody mifanaraka amin'izany koa dia nahasarika ny sain'ny olona. Ny adsorption proteinina ambonimbony dia aretin'andoha iray hafa atrehana mandritra ny fitehirizana sy ny fampiasana azy. Ohatra, ny riL-2 dia halefa eo ambonin'ny fantsona mandritra ny fanosorana, ka miteraka fahaverezan'ny asa.
Fomba hanatsarana ny fitoniana peptide:
Mutagenesis tarihin'ny tranokala: Ny fanoloana ny residu izay miteraka tsy fandriam-pahalemana polypeptide amin'ny alàlan'ny fomba injeniera fototarazo na fampidirana residues izay mety hampitombo ny fiorenan'ny polypeptide dia afaka manatsara ny fahamarinan'ny polypeptide.
Fanovana simika: Misy fomba fanovana simika maro ho peptides, ary ny fanovana PEG no tena dinihina. Ny PEG dia fitambaran-polymer tsy voavahan'ny rano, izay mety simba amin'ny vatana ary tsy misy poizina. Ny fitambaran'ny PEG sy polypeptide dia afaka manatsara ny fitoniana amin'ny hafanana, manohitra ny fahasimban'ny protease, mampihena ny antigenisika ary manitatra ny antsasaky ny fiainana ao vivo. Ny fisafidianana fomba fanovana mety sy ny fifehezana ny ambaratongam-panovana dia afaka manatsara ny fahasalamana ara-batana na manatsara ny hetsika biolojika tany am-boalohany.
Additives: Amin'ny alàlan'ny fanampiana additives, toy ny siramamy, polyols, gelatin, asidra amine ary sira sasany, dia azo hatsaraina ny fahamarinan-toerana peptides. Ny sugars sy polyol dia manery molekiola betsaka kokoa hanodidina ny proteinina amin'ny ambany fifangaroana, ka hanatsara ny fahamarinan'ny peptide. Amin'ny fizotran'ny fanamainana mangatsiaka, ireo zavatra voalaza etsy ambony ireo dia afaka manolo ny rano ihany koa hamorona fatorana hidrôzenina amin'ny polypeptide mba hampiorenana ny fiovan'ny voajanahary ny polypeptide, ary koa hampitombo ny hafanan'ny tetezamita ny vokatra maina-maina. Ho fanampin'izany, ny surfactants toy ny SDS, Tween, ary Pluronic dia afaka misoroka ny adsorption, ny fanangonana ary ny rotsak'orana peptides ambonimbony.
Fanamainam-pahefana: andiam-pihetseham-po simika misy peptides, toy ny fanala, imination-elimination, hydrolysis, sns., Dia mila rano handray anjara, ary ny rano dia azo ampiasaina ho toy ny dingana finday ho an'ny reactants hafa. Ho fanampin'izany, ny fihenan'ny atin'ny rano dia mety hampitombo ny mari-pana denaturation an'ny polypeptide. Noho izany, ny lyophilization dia afaka manatsara ny fahamarinan'ny polypeptide.
Ny antibiotika polypeptide dia karazana antibiotika misy toetra mampiavaka ny polypeptide, ao anatin'izany ny polymyxins (polymyxin B, polymyxin E), bacitracin (bacitracin, gramicidin) ary vancomycin.
Vondron antibiotika tafasaraka amin'ny bakteria samihafa ao amin'ny karazana Polymyxa dia azo zaraina ho karazany 8 polymyxin A, B, C, D, E, K, M ary P arakaraka ny firafitr'izy ireo simika. polymyxine B ary polymyxin E. manana poizina ambany azo ampiasaina amin'ny fampiharana klinika. Ireo karazana maro hafa dia misy poizina loatra ka tsy azo ampiasaina amin'ny fampiharana ara-pahasalamana. Polymyxin B sy Polymyxin E dia nampiasaina hitsaboana Pseudomonas aeruginosa henjana na aretina bacilli gram-négatif hafa tamin'ny 1960. Noho ny fivoaran'ny antibiotika vaovao misy poizina farany ambany sy mahomby, dia nosoloin'ireto zava-mahadomelina roa ireto, fa raha ny bakteria voalaza etsy ambony dia mahatohitra antibiotika hafa ary mora tohina amin'ireo fanafody roa ireo, dia mbola azo ampiasaina ho zava-mahadomelina safidy faharoa.
Ny vokatra ara-barotra an'ny polymyxine B is polymyxine sulfate; ny vokatra ara-barotra an'ny polymyxin E dia misy polymyxin E methanesulfonate sy polymyxin E sulfate. Colistin dia fanafody mitovy amin'ny anarana samihafa amin'ny polymyxin E. Polymyxin B sy Polymyxin E dia mitovy karazana bakteria. Ny ankamaroan'ny bacilli ratsy Gram toy ny Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsella spp., Enterobacter spp. dia mora tohina, ary mora tohina amin'ny Haemophilus influenzae, Pertussis, Salmonella, ary Shigella, somary mahazaka Proteus sy Serratia marcescens, raha Neisseria sy Brucea kosa tsy mora tohina. Tsy mandaitra amin'ny bakteria Gram-positive io. Afa-tsy ny bakteria fragilis, ny Bacteroides hafa sy ny Fusobacterium dia samy mahatsapa ny bakteria anaerobika avokoa. Ny bakteria dia mampitombo ny fanoherana ireo antibiotika ireo miadana ary indraindray tsy mahazaka Pseudomonas aeruginosa azo jerena. Polymyxin B sy Polymyxin E dia misy fanoherana tanteraka.
Ireo fanafody roa ireo dia tsy ampiasaina intsony ho fanafody fitsaboana rafi-pitsaboana, fa ampiasaina fotsiny toy ny fitsaboana isan-karazany ao an-toerana, toy ny fitsaboana ny lakandrano fihainoana ivelany, ny kornea na ny aretin-koditra. Ho fanampin'izany, dia azo ampiasaina amin'ny fanosorana ny lalan-dra na ny fitsaboana entona.
2. Bacitracin sy Gramicidin
Izy ireo dia misaraka amin'ny Bacillus licheniformis sy Bacillus brevis, izay samy asidra amine mifamatotra amin'ny rojo peptide. Ireo antibiotika roa ireo dia manana fiasan'ny bakteria avo indrindra amin'ny bakteria Gram-positive. Ny staphylococcus aureus sy ny β-hemolytic streptococcus dia mora tohina amin'izy ireo, ary matetika izy ireo dia mahatohitra ny vondrona B streptococci. Bacitracin dia mora tohina amin'ny Neisseria pathogenika, raha mbola kely malemy kosa ny gramicidin.
Tsy mandaitra tanteraka amin'ny bacilli Gram-négatif. Ny fomba fiasan'ny bacitracin dia ny fanakanana ny fampifangaroana ny rindrin'ny sela bakteria; gramicidin dia manova ny fitrandrahana ny membrane cytoplasmic bakteria. Satria misy poizina mahery vaika ireto antibiotika roa ireto, dia ampiasaina amin'ny fitsaboana eo an-toerana ihany izy ireo. Izy io dia azo amboarina amin'ny menaka, menaka, savony, sns. Ho an'ny fampiasana ivelany, na foronina ho vahaolana amin'ny arina maso, orona, fanadiovana ny ratra, fikosoham-bolo, sns. Matetika ampiarahina amin'ny neomycin or polymyxine B hanitatra ny fihanaky ny bakteria.
Antibiotika glycopeptide tricyclic tafasaraka amin'ireo zanatany Streptomyces tamin'ny 1956. Misy fiantraikany mahery amin'ny bakteria amin'ny bakteria miabo tsara izany. Nampiasaina be tamin'ny fampiharana ara-pahasalamana tamin'ny 1958. Satria ny fanomanana tamin'izany fotoana izany dia misy loto, matetika izy ireo dia niteraka fiatraikany ratsy toy ny hatsiaka, tazo avo, ary fiakaran'ny tosi-dra, ary ny fahatongavan'ny penicillin mahazaka penicillin tamin'ny taona 1960. Noho izany, nihena be ny fampiharana ara-pahasalamana. Ny fanomanana an'io fanafody io dia nodiovina, ary ny fiatraikany ratsy dia nihena be, ary ankehitriny dia raisina ho toy ny fanafody azo antoka.
Vancomycine afaka miady am-pahombiazana amin'ny bakteria Gram-positive, ao anatin'izany ny Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans ary Enterococcus. Bacillus anthracis, diphtheria, tetanus, clostridium, sns. Dia samy mahatsapa izany avokoa, saingy tsy mandaitra amin'ny bakteria Gram-negatif, Rickettsia, Chlamydia, mycoplasma, ary holatra. Ity fanafody ity dia mahalana vao mampitombo ny fanoherana, na dia misy aza, dia mivoatra miadana. Tsy mifanohitra amin'ny antibiotika hafa izy io. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, ary Streptococcus pneumoniae izay mahazaka antibiotika maro hafa koa dia mora tohina amin'izy ireo, noho izany dia zava-dehibe ny fitsaboana ny aretina vokatry ny bakteria mahatohitra toy izany.
Ny mekanikan'ny antibiotika nentim-paharazana dia ny antibiotika mifatotra amin'ireo mpandray ny ampahany manokana amin'ny pathogen, ka manimba ny firafitry ny pathogen na manakana ny biosynthese sasany hahatratrarana vokatra bakteria na bakteria. Rehefa miova ny toerana kendrena amin'ny asany dia very ny antibiotika vokatr'io antibiotika io, izay no antony lehibe mahatonga ny bakteria hanohitra ny antibiotika. Ny antibiotika peptide dia manimba mivantana ny fonon'ny sela pathogens ary mamono bakteria, noho izany dia tsy mora ny mamorona fanoherana ny zava-mahadomelina. Ho fanampin'izany, izy io koa dia misy alkaline matanjaka, fitoniana amin'ny hafanana ary toetra mampiavaka ny bakteria isan-karazany.
Ny ankabeazan'ny antibiotika misy dia mikendry ny làlam-metabolika manan-danja ilaina amin'ny famokarana, ka tsy mandaitra afa-tsy amin'ny otrikaretina izy ireo amin'ny dingana famerenana; raha ny antibiotika peptide kosa dia mikendry ny membrane ary mandaitra ho an'ny zavamiaina bitika tsy miasa na metabolika. Ity fomba fiasa tsy manam-paharoa ity dia tsy niteraka olana fanoherana hatreto. Midika izany fa ny antibiotika peptide dia tsy afaka mamono otrikaretina soa aman-tsara fotsiny, fa mampihena kely na manafoana ny mety ho fanoherana ny zava-mahadomelina, ka hamaha indray mandeha izao ny olan'ny fanoherana zava-mahadomelina atrehin'ny olombelona.
Ny antibiotika mahazatra dia niseho tamin'ny aretina pathogenika tsy mahazaka zava-mahadomelina, ary ny olana amin'ny fanoherana zava-mahadomelina ny bakteria pathogenika dia nandrahona ny fahasalaman'ny olona. Ny fahitana karazana antibiotika vaovao dia fomba iray mahomby hamahana ny olan'ny fanoherana zava-mahadomelina. Ny antibiotika polypeptide dia heverina ho manana voka-pikarohana malalaka amin'ny sehatry ny pharmaceutika noho ny fiasan'ny bakteria avo lenta, ny fatran'ny haben'ny bakteria, ny safidy maro isan-karazany, ary ny fahasarotan'ny soritr'aretina kendrena hamokatra fiovan'ny fanoherana.
Amin'izao fotoana izao, antibiotika peptide isan-karazany no mandalo fanadihadiana azo atao mialoha. Na izany aza, ny fotoana fikarohana ny antibiotika peptide dia fotoana fohy ao anatin'ny 30 taona. Mba hisolo ny antibiotika dia mbola maro ny olana amin'ny fampiasana ara-barotra azy miely, ao anatin'izany ny loharano, ny vidiny ary ny olana ara-teknika.
Tao anatin'izay taona lasa izay, na dia nisy aza ny fandrosoana natao tamin'ny fikarohana tsy fitantanan-tsindrona ny polypeptides, mbola betsaka ny zava-tsarotra. Saika ny fanafody peptide rehetra dia mitaky fanamafisana ny fidiran'ny mucosal, ary misy karazany maro amin'izy ireo. Ny olana dia ny fomba hampihenana ny fahasosoran'izy ireo ary raha misy fiantraikany amin'ny tsy fivadihan'ny epithelium ny fampiasana maharitra.
Ny fanoloana ny bitika bitika ho an'ny fanatsarana ny fidirana dia mety ho fomba mahomby amin'ny fitantanana am-bava. Na dia nisy aza ny zava-bita sasany tamin'ny fandresena ireo sakana Osmotic sy sakana anzima, tsy nisy ny fandrosoana. Ho fanampin'izay, ny olan'ny fahazoana hepatic an'ny peptides tokony hojerena tsara. Ny fahafantarana ny fifandraisana misy eo amin'ny mekanisma, ny firafitra ary ny fahazoan-dàlana amin'ny aty dia hanampy amin'ny fahatsapana ny nofinofin'ny fitantanana am-bava ny peptides.
Antibiotika polypeptide manana ny firafitry ny polypeptides, noho izany dia manana ny mampiavaka ny tsy fandriam-pahalemana polypeptide ihany koa izy ireo, fa ny antibiotika polypeptide dia manana ny tombony manokana ihany koa, izany hoe, tsy mora ny manangana fanoherana zava-mahadomelina.
BALLYA manome a fitsapana ballya-vancomycin ary ballya-polymyxin-b-test hilaza aminao raha misy vancomycin ary residues polymyxin b amin'ny sakafo sy sakafo.
LibreTexts: Polypeptides sy Proteins
NCBI: Antibiotika Peptide